P (Fiaraha-miasa) - Mianatra mora foana sy haingana rehetra tokony ho fantatra eto - Ny mpahay lalàna any Danimarka. Rehetra ny mpisolovava an-Tserasera
P (Fiaraha-miasa) - Mianatra mora foana sy haingana rehetra tokony ho fantatra eto
Amin'ny juf, dia famerenana ny isan-karazany ny orinasa
Ny ankamaroan'ny olona dia mahafantatra ny zavatra iray hany proprietorship dia ny raharaham-barotra iray ny tompony izay dia ho mendrika manokana amin'ny rehetra ny harenaNy Ao S, izay feno anarana dia amin'ny ankapobeny ny fiaraha-miombon'antoka, dia maneho, toy ny hany proprietorship nandritra ny roa na mihoatra mpanorina sy ny tompony. Ny fitoviana maro ary ny hany tena fahasamihafana dia ny anarana sy ny mpamorona. Afaka mahazo topimaso selskabsformerne eto, raha isika anisan'izany ny mandeha in-lalina fotsiny interessentskabet, anisan'izany ny madio, ny findramam-bola an-drenivohitra sy ny fananganana ny orinasa. Izay rehetra tompon'ny iray Ao amin'ny P, fiaraha-miasa, dia mendrika na manokana, tsy misy fetra sy miaraka ary niaraka mendrika.
Ary mety ho nalevina tao amin'ny fasana toy izany koa
Midika izany fa raha toa ka S hanatanterahany ny trosa, ny tompon'ny ny interessentskabet ny fananana ny handoa izany trosa izany, raha toa ka ny orinasa tsy mahavita izany ary afaka ny ohatra, telo mpanorina tsy mandoa ny anjarany, ity tsy maintsy aloa noho ny hafa mpanorina ny orinasa. Mijoro mba ho tonga Ao amin'ny S, izay misy ny tena mety mba hahazoana trosa, noho izany dia hevitra tsara ny mahafantatra ny hafa mpikambana mpanorina ny tsy miankina ara-toekarena, ny toe-piainana. Ireo toe-javatra mety hitarika ny vokatry ho anao, raha toa ka tsy mandeha ny orinasa toy ny tianao, ary mety hiafara amin'ny mba hihazonana ny"olona hafa ny trosa".
Vokatry ny tsy manam-petra, ny tena manokana, sy ny mpiray maro madio ankapobeny ny fiaraha-miasa, S, dia tsy misy intsony ny malaza indrindra amin'ny teny.
Hafa karazana orinasa, toy izany dia mitovy amin'ny ApS (tsy miankina voafetra orinasa) dia tsy maintsy madio io ary noho izany bebe kokoa ampiasaina. Ny CVR-laharana: dia Ahitana ihany ny olona voajanahary ary tsy misy olona ara-dalàna (fikambanana, orinasa hafa, sns.), afaka interessentskabet anmeldeles ny zavatra Varotra sy ny Orinasa fahafahana misafidy sy mahazo CVR-isa. Raha tsy misy ny CVR-laharana: tsotra fifanarahana eo amin'ny antoko, dia te-hiara-miasa amin'ny tetikasa, dia ampy ny mahazo ny Any S.
Ary izay tsy misy andraikitra voafetra amin'ny io karazana orinasa, amin'ny ankapobeny ny fiaraha-miombon'antoka, dia tsy tokony ho nanangana na inona na inona ara-dalàna, raha tsy tianao ny CVR-maro ny raharaham-barotra.
Tsarovy fa interessentskabet dia tsy maintsy misoratra anarana ho vat raha ny fidiram-bola nahazo ny amin'ny roa ambin'ny folo volana manaraka dia tombanana hifarana amin'ny. Eto ambany izany vola izany dia tsy ilaina, fa matetika hevitra tsara ny vat ny orinasa iray. Isaky ny endrika manana ny tombontsoa tsy manam-paharoa. Izany no interessentskabet ihany koa, fa kosa manana ihany koa ny fatiantoka. Ny isika hijery ny ao anatin'izany ny: Ny Tany S dia ho toy ny fiaingana dia tsy soso-kevitra vahaolana. sek ny renivohitra lavitra lehibe kokoa sy ny soa tsy miankina orinasa voafetra ho foana ny mahasoa kokoa ho vahaolana, satria misy ny lalana momba ny zavatra antsipiriany sy ny tsy an'ny tena manokana, tsy misy fetra sy iraisana sy ny maro madio. Ao S noho izany dia mety ho kely kokoa ny tetikasa izay ny mpanorina ny tsy tokony hahazo na taratasy na fombafomba mba ho eo amin'ny toerana samy hafa. Tany S dia araka ny voalaza any am-piandohana tokana mpikambana ao amin'ny orinasa roa na mihoatra ny olona - fa mba hanangona ny renivohitra nandritra ny ApS dia ho betsaka kokoa ny manomboka, ary koa misy tetikasa vaovao fa tsy. Raha toa ka manana fanontaniana Ao amin'ny S ny, ny jeneraly fiaraha-miasa, afaka manoratra ny fanehoan-kevitra eto ambany na mangataka ny taratasy boaty ao amin'ny tsanganana ankavanana.
Raha tokony ho ny Tany S dia afaka ho raisina ihany koa ny fananganana ny ApS, ny fananganana ny IVS - na, amin'ny ankapobeny, ny mikasika ny selskabsstiftelse eto.
Isika roa izay no ataovy Ao an-S toy ny tetezamita vahaolana ho an'ny ApS, fa iray ihany ny antsika hanana fonenana sy ny fahazoan-dalana amin'ny asa ao Danemark p. Azo atao ve eo anoloan'ny trano fonenana sy ny asa fahazoan-dalana dia omena. Manoro hevitra aho fa ny famerenana, ny iray Ao amin'ny P no tsara vahaolana - eto anao dia tokony ho azo antoka azo antoka fa tsy manohitra ny tsy manam-petra, mpiray sy ny maro, sy madio manokana, dia atao amin'ny ny orinasa.
Fahazoan-dalana aho mba hanao interessentskabskontrakt, raha toa ka misafidy ny ho Ao amin'ny S, na eo Amin'ny ara eo amin'ny ApS taty aoriana.
Raha misy olona roa mpiara-miasa ny fialàny amin'ny fiaraha-miasa, ny sisa antoko mbola toy izany koa amin'ny fiaraha-miasa (toy izany koa ny VAT maro sy anarana) amin'ny mpiara-miasa vaovao. Tsara fanahy na amin'inona, Jesper Hi. Isika dia tovolahy roa, izay te mba hanomboka ny raharaham-barotra izay tsy mivarotra toaka ny internet. Tsy te-ho tompon'andraikitra manokana ny manokana vola be, ary izany no tokony kokoa ho toy izany isika dia afaka misintona ny vola avy amin'ny orinasa indray. Misy orinasa manokana endrika azonao fahazoan-dalana mankany.
Mialoha takM Eto dia afaka hatrany hisintona ny vola avy ary ny vola - zato rehefa, misy accumulations.
dolara ao amin'ny orinasa. Afaka mahazo ny IVS ho an'ny kely vola - vitsivitsy arivo dolara, ary avy eo dia na ny mpampanoa lalàna sy ny zavatra raharaham-barotra fahefana karama: Mety ho tombony mba hanorina dia, raha te-hampiasa ny birao vehivavy hanao zavatra hafa toy ny tamin'ny fanaovana kaonty, varotra avy amin'ny tambajotra, sy ireo birao hiasa ho an'ny orinasa maro, dia tokony ho nandray ny fotoana feno, sy ny karama sy ny asa rehefa avy funktionærloven. Na dia izany tsara kokoa izay misy ny fandraisana mpiasa avokoa ny azy, ary ny hafa fotsiny ny volavolan-dalàna ho an'ny ora izy no nandany ny efatra ny olona orinasa.
HejVi dia roa taona handehanana misotro ronono izay manao ny mividy an-trano any mahaliana orinasa any Aarhus.
Mahazo kely momba io karazana tompony koa satria isika dia tsy mahalala ny endrika ity sy ireo mpanolotsaina sady manana fahalalana manokana izany.
Kotyme dia ny hoe Iray dia tsy maintsy mandefa ny isan-taona ny fanambarana sy mandoa slips ny banky.
Inona ampy tanteraka ok.
Aho fa tsy nahita azy ho toy ny andelsbevis, tsy miaraka ary niaraka mendrika noho ny hafa raha misy zavatra tokony handeha diso. Ny toe-karena tokony ho mba aho fa mampatahotra.
Moa ve ianao manana torohevitra tsara.
Amim-pahatsorana Kagayanen Beck ny Fividianana ny trano bongony ny refurbishment miaraka ny olon-dehibe ny ankizy.Efa nijery ny trano bongony, izay isika, dia toy ny manamboatra ka nandriatra ary mety hivarotra indray. Mety ho hevitra iray(ary mety hamorona ao amin'ny s ho an'ny zavatra toy izany.Isika tsirairay dia samy manana ny tsara tsy miankina amin'ny toe-karena sy ny mahafantatra ny fitsipiky ny madio. HejVi roa psikology izay maniry ny hanomboka toy ny tena-miasa. Isika dia mihevitra, izay virksomhedskonstruktion tsy maintsy misafidy isika - roa hany proprietors na Amin'ny S. Isika dia hanana ny birao, hizara ny anaran ny orinasa (na ny anarana dia ho tafiditra ao anatin'ny zana-dohateny), hizara ny namany sary, mizara ny sasany ny fikarakarana anjara amin'ny fampianarana asa ary dia hizara ny mahazatra ny fandaniana (ohatra, karama avy amin'ny fælleskonto). Isika dia mampiasa ny tsy miasa tsara ny tena ary ny asa mety ho somary hafa. Inona no azonao manoro hevitra antsika.Misaotra anao mialoha noho ny fanampiana - fiarahabana Maria, izaho sy Ny rahalahiko, raha jerena ny tena mba hanomboka ny fanadiovana kely raharaham-barotra. Isika dia kely amin'ny fisalasalana na dia tokony ho Ao S na na inona na inona izany mihitsy ny tokony ho.
Efa ao an-tsaina ny manomboka toy ny zana-mpiantoka.
Inona no azonao fahazoan-dalana mankany.
Raha ny Tany S dia ahitana olona telo tompony, ary izany dia tsy CVR tsy misy, mety dia ho nampiasa mpiasa iray tao amin'ny orinasa. Izany dia ny orinasa izay te-manakarama fleksmedarbejder folo ora isan-kerinandro ho an'ny fitantanana ny asa.
Izaho sy buddy hamorona ny raharaham-barotra ary tsy manana orinasa mialoha.
Mila mamorona hany proprietorship tsirairay, ary avy eo dia hiaraka amin'izy ireo any amin'ny interessentselskab. Raha eny, ahoana no tokony avy eo dia nitatitra ny vat, sns. Dia izany amin ny orinasa ho azy manokana, na amin'ny alalan'ny interessentselskabet.
Tsy afaka nandresy ny hany miara.
Aho, dia, araka ny soso-kevitra, afa-mamorona ny fiaraha-miasa (fantatra ihany koa ho toy ny iray Ao amin'ny S. Izaho sy ny vadiko any amin'ny eritreritry ny mividy campsite. Izany dia amin'ny fomba rehetra ho tombony mba ho endrika ho an'ny selvskab. HejForskellen amin'ny iray Ao S sy ny andraikitra voafetra orinasa toy ny f. ny IVS na ny ApS, dia ho, fa tsy mendrika manokana fa ny orinasa. raha ny lasy rehefa mandeha bankirompitra, dia ny manokana ny lafiny ara-bola mbola tsy nitoriana mihitsy. Ny tsimatra ao amin'ny lafiny iray hafa, Ao amin'ny S, dia ihany koa ny boky ny fananany manokana ao amin'ny orinasa. Mety koa hahatonga ny fahatsapana tsara, mba ho tonga madio ihany orinasa fa tsy Amin'ny S.
Ve ianao hifindra vola sy miverina eo amin'ny tsy miankina kaonty sy ny raharaham-barotra ny kaonty, rehefa manana aho raha toa ka efa nametraka ny pc amin'ny ny tsy miankina kaonty, afaka aho avy eo hamindra ny vola avy amin'ny orinasa kaonty, ny kaonty manokana, na ny fomba dia ny fitsipika iray Ao amin'ny S.
JUF dia ny pejy miaraka amin'ny ara-dalàna sy virksomhedsøkonomisk vaovao ny mpanjifa, ary koa ny fahafahana hahazo ny telo teny nindramina tamin'ny mpahay lalàna sy bola any Danemark ny matanjaka indrindra tambajotra.
Vonona izahay hanampy anao påtlf.
Danoà - Gyldendal - Davaky Store Danske
Млад мъж почина след инжекции масло в мускулите - главен лекар, предупреждава за опасна тенденция - TV-2
© 2022 Ny mpahay lalàna any Danimarka. Rehetra ny mpisolovava an-Tserasera